That's so good, right?: November 2013
Posted by Alex Aung at 5:26 AM No comments:
Posted by Alex Aung at 9:49 PM 1 comment:
သူပါလား? ကျွန်တော့်ဧည့်သည်အသစ်လေးလေ။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ညလောက်က အမှောင်ရိပ် လမ်းကြားထဲမှာ အနမ်းမိုးစွေခဲ့သူပေါ့။ သူ့ အ၀တ်အစားတွေက ပိုပြီး fitting ဖြစ်နေပါရော သူ့ခန္ဓာကိုယ်မှာ။ ခန့်ခန့်ထည်ထည် လူကြီးမင်းပုံမဟုတ်ဘဲ လွတ်လပ်ပေါ့ပါးတဲ့ စတိုင်လ်နဲ့အပြည့်။ မမျှော်လင့်ဘဲတွေ့ခဲ့တဲ့ညက ပုံစံမျုးမဟုတ်တော့။ အဖြူစွတ်စွတ် သူ့ရှပ်အင်္ကျီရဲ့ အနည်းငယ်ဟထားသော နေရာမှ မြင်နေရသည့် ရင်ဘတ်မွှေးလေးတွေက ကျွန်တော့်ကို ရန်ခုန်မှုပေးလာတာပေါ့။
၀တ်ထားတဲ့ ဘောင်းဘီပျော့ကလည်း ပေါင်တံတွေနှင့် ကွက်တိ။ အဆန်းအပြားပေါင်းစုံကြားက တကယ့်ဘုရင်ပါပဲ။ အ၀ါရောင် တစ်ချက်တစ်ချက်သမ်းတဲ့ သူ့မျက်ဝန်းတွေက တစ်ခန်းလုံးရွေ့ လျားနေရာက ကျွန်တော့်ဆီမှာ အဆုံးသတ်တယ်။ ကျွန်တော့်တစ်ကိုယ်လုံး ခြေဖျားမှ ဆံစအထိ တဆတ်ဆတ်တုန်ရင်လာပြီး တွန်းထိုး လာတဲ့ ဖီလင်မျိုးဖြစ်ပေါ်ခံစားမိပါရဲ့။